अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि आस्था राख्नु (‘ईमान’ का ६ वटा आधारहरु) – Islam Guide
अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि आस्था राख्नु ('ईमान' का ६ वटा आधारहरु)
अल्लाहका केही नामहरु-
अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि आस्थाका केही फाइदाहरु-
१) अल्लाहको ज्ञान, जसले अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि जति विश्वास गर्छ, अल्लाहको ’boutमा उसको ज्ञानमा त्यत्ति नै वृद्धि हुन्छ, ईमान र आस्था बलियो हुन्छ, मुटुभरि उहाँकै लागि माया र आदर हुन्छ।
३) अल्लाहका नाम र विशेषताहरुद्वारा प्रार्थना गर्नु, अल्लाहले भन्नु भएको छ… “अल्लाहका राम्रा नामहरु छन् र उहाँलाई उहाँकै नामबाट पुकार्ने गर।” (श्रोत- सूरह अल्-आराफ :७/१८०) जस्तै– हे अन्नदाता ! हामीलाई रोजी देऊ, हे प्रायश्चित स्वीकार्नेवाला ! मेरो प्रायश्चितलाई स्वीकार गरि देऊ, हे करुणामय ! ममाथि कृपा गरि देऊ आदि।
ईमानका उच्च श्रेणीहरु-
ईमानको सर्वोच्च श्रेणीलाई एहसान (परोपकार) भनिन्छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले यसको परिभाषा यसरी दिनु भएको छ… “अल्लाहको उपासना यसरी गर कि तिमी अल्लाहलाई हेरिरहेका छौ, यदि तिमीले हेरिरहेका छैनौ भने अल्लाहले तिमीलाई हेरिरहनु भएको छ।” (श्रोत- बुखारी : ५०, मुस्लिम : ८)
अल्लाहमाथि आस्थाका केही फाइदाहरु-
२) ईमानले नै सुखमय जीवन प्राप्त हुन्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “आस्थावान पुरुष र महिलामध्ये जसले सत्कर्म गर्छ, हामी उसलाई सुखमय जीवन यापन गराउने छौं।” (श्रोत- सूरह अन्-नहल : १६/९७)
३) ईमानले आत्मालाई अन्धविश्वास र अनावश्यक कुराहरूबाट पवित्र पार्छ। जो व्यक्ति वास्तवमा अल्लाहमाथि आस्था राख्दछ, उसका सम्पूर्ण मामिला अल्लाहसँग आवद्ध हुन्छ, ’cause उहाँ नै ब्रम्हाण्डका सृष्टिकर्ता र सत्य ईश्वर हुन्। यसले आस्थावानको मनोबललाई बलियो पार्छ, ऊ सृष्टिबाट भयभित हुँदैन, अन्धविश्वास र अनावश्यक कुराहरूबाट मुक्त हुन्छ।